Esekwenzile ukuhlolwa sokukhulelwa , futhi uqiniseke ukuthi is ukhulelwe, owesifazane enquma ngokuphelele ukushintsha indlela yakho yokuphila - siphumule ngokwengeziwe, ngaphansi esishubile futhi wethukile, udle kuphela ukudla okunempilo, kuyalungiswa kuphela ezicini ezinhle, futhi okubaluleke kakhulu, hhayi ukulimaza, hhayi ukuthatha izidakamizwa. Phela, nabo basuke ziyingozi kumntanakhe ongakazalwa.
Nokho, ukuphila kwangempela kuyoba ngezinye izikhathi akufani nokwenza uhlelo, futhi noma iyiphi ukhulelwe kungaphumela batheleleke nge yisiphi isifo esithathelwanayo ukuthi cishe sonke isikhathi wayebaphatha kuphela ngemithi elwa namagciwane.
Futhi ukukhwehlela kanye umphimbo obuhlungu - lezizibonakaliso nezifo ezithelelwanayo angase azithole akuyona kuphela engathandeki, kodwa ngezinye izikhathi yingozi kwengane esiswini. Ngakho-ke, kwezinye izimo, odokotela antibiotic, ezifana amoxicillin - ngesikhathi sokukhulelwa izidakamizwa ngempela ayinangozi.
Yikuphi isigaba kwamaphilisi penicillin akuzange kusize, amoxicillin ngesikhathi sokukhulelwa ingasatshenziswa ngoba izifo zemigudu yokuphefumula, ukuvuvukala, izifo ezithathelwanayo, njll
Uma owesifazane elinde ingane, kukhona izifo ezifana sepsis, cystitis, pharyngitis, cishe, udokotela wezifo zabesifazane linqume amoxicillin ngesikhathi sokukhulelwa has a spectrum sasivumela ezibanzi womsebenzi.
Ngisho ukungakhululeki okuncane kungase kube isizathu kwetintfo kunalokho sina yokukhulelwa. Ngakho-ke, konke yowesifazane ungakhululekile, kufanele kube isikhathi kudokotela. Ngisho ngaphansi kwaziphi izimo okufanele bahlanganyele self-ukwelashwa, njengoba kungaba yingozi ezingenzeka embungwini.
Ukungabaza, ukukhathazeka nokwesaba uma ukuthatha imithi ukhulelwe - isimo kuyaqondakala ngokuphelele owesifazane olindayo nge novalo kid. Futhi uma izidakamizwa ihlobene nemithi - ukuthi okuba yingozi ukukhathazeka kumane kukhule.
On isicelo imithi enjalo efana amoxicillin, ukukhulelwa ngokuvamile ebekwe udokotela, sichaza kulesi sihloko.
Kuphephile yini abesifazane abakhulelwe ukusebenzisa amoxicillin, izinkomba zazo makhulu ububanzi ngokwanele? Lokhu indlebe izifo, endocarditis, septicemia, namathansela, sinusitis, wokugaya ukudla izifo pheshana, ngomgudu womchamo. Odokotela ukholwa ukuthi imiphumela singenakwenzeka emibi amoxicillin embungwini, Nokho, linqume kuphela ezimweni ezimbi kakhulu.
Yiqiniso, inkampani eyenza imithi ekhiqiza izidakamizwa, kusho amoxicillin ngempela ayinangozi, kodwa udokotela ekunika ngokuvamile enza ngakho ngokuqapha okukhulu, futhi kuphela kunjalo, lapho isifo kungabangela umonakalo ngaphezulu ezingenzeka embungwini ngaphandle izidakamizwa uqobo.
Ucwaningo luthole ukuthi amoxicillin akanayo nomphumela ongemuhle pathogen ngesikhathi sokukhulelwa, futhi ikakhulukazi i-fetus, okuningi kungenzeka ingozi ukopha kufihlwe.
Amoxicillin Isikali isinqumo okuyinto sokukhulelwa kufanele kube olunembile kakhulu, kunqunywa udokotela ukuba khona. Kuyadingeka ukuba ngokuqinile ulandele imiyalelo ebalulwe imithetho ukuphuza imithi nakanye ngesikhathi esithile, baphuze ingilazi enkulu yamanzi. Amoxicillin capsule kugwinywe wonke, akudingeki ukuba ukuhlafuna noma evulekile, kodwa tablet, kunalokho, kungcono ukuhlafuna kahle.
Uma ukhulelwe esimisiwe amoxicillin slurry ukungaguquguquki, kubalulekile ukusebenzisa spoon wokulinganisa isiqiniseko, ungakwazi neze aphuze imithi kusuka kwenye spoon, futhi leyo mali lungase lungahambisani nalolo ubukhulu kwezinkambiso wathola.
Kungakhathaliseki ukuthi imithi owesifazane iziphuzo, kufanele siqiniseke ukuthi kufanele ziphathwe ngaphansi kweso esiqinile sikadokotela wakho. Awusoze aphathwe ngokuzimela. Qiniseka ukuhlola uma kukhona owesifazane okhulelwe iguliswa ukuthatha imithi elwa namagciwane, futhi uma impendulo inguyebo - awukwazi ukuthatha amoxicillin kunoma isiphi isimo.
Yini othulwe izingane ezincane Christening?
Derby - Iyini? Uyini derby ebholeni futhi kwezemidlalo Equestrian?